ဂျင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်အထည်များကို မလျှော်ချင်ဘူးဆိုရင် (This is why you should NEVER wash your jeans, according toaman who should know best) | Moe Naymin
ဂျင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်အထည်များကို မလျှော်ချင်ဘူးဆိုရင် (This is why you should NEVER wash your jeans, according toaman who should know best)
ဂျင်းအ၀တ်အထည်တွေကို လျှော်ဖို့ဆိုရင် လူတော်တော်များများ ပျင်းတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့သူများအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး ဂျင်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ Levi's ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ဂျင်းတွေဟာ လျှော်ဖို့ မသင့်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်တဲ့။ သူက Fortune မဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူ့ရဲ့ ဂျင်းအ၀တ်အထည်တွေကို အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်လျှော်လေ့မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောလို့ ဂျင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အစွန်းအထင်းတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတော့ သူက ဂျင်းပေါ်က အစွန်းအထင်းတွေကို ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်တိုက်ဖယ်ရှားတယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့ သူက ကောင်းမွန်တဲ့ ဂျင်း ၀မ်းဆက်တစ်စုံဟာ အမြဲတမ်း အ၀တ်လျှော်စက်ထဲကို ထည့်လျှော်ဖို့ လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာတာက လွဲလို့ပေါ့ နောက်ပြီး ဂျင်းအ၀တ်အထည်တွေမှာ ကပ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက်တော့ ဂျင်းအ၀တ်အထည်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မ၀တ်ခင် ခြောက်သွေ့သွားအောင် ပြန်လှန်းဖို့တော့ သတိထားပါ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ဂျင်းတွေကို လျှော်ဖို့ပျင်းသူများအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Nobody likes doing laundry. If you're one of those people who can't bare to tackle your huge pile of dirty washing , then we have some good news for you. Apparently we shouldn't be washing our jeans. Ever.
What might sound like advice fromasomeone who's too lazy to stick stuff in the machine is actuallyatip from the CEO of Levi's - you know, the people who knowalot about jeans. In an interview with Fortune, Chip Bergh admitted that his jeans had "never seen the inside ofawashing machine ". Instead, he "spot cleans" stains withatoothbrush. Bergh admits that when he previously raised the subject, he startedadebate between real "denim loyalists" and everyone else. We assume by "everyone else", he means people who don't want to walk around in dirty clothes. He said: "The point I was trying to make, though, importantly - it wasawake-up call to consumers that we go into autopilot and after we've finished wearing something, we just automatically toss it into the laundry. "A good pair of denim doesn't really need to be washed in the washing machine - except for very infrequently or rarely."
He argues that as well as wasting water, washing your best pair of Levi's actually damages them. We know what you're thinking. This is gross. What about all those germs? There'saway to deal with that, too...
If you put them in the freezer, it kills bacteria. That is, if you have room in your freezer and enough time to defrost them before you head out of the house. We don't want you gettingachill.